collaboration | t h oeh tan e
(ရေခံမြေခံ) ကောင်းတဲ့စိတ်ရဲ့ ကောင်းကင်ထဲ ချိတ်တွယ်ထားတဲ့ ကြယ်ကလေးတွေ
ပြောရမယ်ဆို အဲဒီလို ဖြစ်ဖြစ်နေတာ
power ဟာ အရေအတွက်လား အရည်အသွေးလား
သူရောက်တဲ့ နေရာတိုင်းမှာ သူ့ကို ဆန္ဓပြ တဲ့သူရှိတယ်၊
ဆက်သွယ်မှုဧရိယာပြင်ပက ဒေသခံ ပဟေဠိတစ်ခုလား
သူ့ ယဉ်ကျေးမှု ဟာ ရိဆွေးပြီးပေါက်သွားတယ်
ဒေသခံ တွေရဲ့ ဘာသာစကားဟာ
သက်တောင့်သက်သာ ဖြစ်မှု ကို ပြန်လည်မေးခွန်းထုတ်ရင်း
our-dentity ပျောက်ဆုံး ကုန်တယ်
အရေးပေါ် အသားကိုယ်စီ အသွေးကိုယ်စီနဲ့
သူရဲကောင်းတွေ လွှမ်းမိုးကြီးစိုးတဲ့ ခေတ်မှာ
ကြောက်ချီးအပါဆုံး ဆုတံဆိပ် အလီလီ
သူ ရခဲ့တာ၊ ပြန်ဖြင့် မပြောချင်တော့ဘူး
မျက်နှာပေါ် ချွေးပေါက်တွေကြားထဲမှာ ကပ်ညှိနေတတ်တဲ့
တောတွင်းမသိစိတ်တွေ၊ အင်း . . ဖူးကို့ကြီး ပြောတယ်၊
စိတ် ဟာ ခန္ဓာရဲ့ အကျဉ်းထောင်
ယဉ်ကျေးမှုမြင့်မားတဲ့ ဆောင်ကြာမြိုင် လမ်းကြားများနဲ့
ကိုယ့်လမ်းကိုယ် ကြိုးပမ်းပိတ်ဆို့မှုနဲ့ ပြတင်းပေါက်အပြင်
ပြန်ဖတ်ကြည့်ရမှာက အရေးအသား ကျွမ်းကျင်မှု
အကြားမှာ အဆက် နဲ့ အသွယ်
မိတဲ့ အတွေး နဲ့ လွတ်တဲ့ အတွေး နဲ့
လွှတ် တဲ့ အရေး နဲ့ ခက်တဲ့ အသား
အရေးအသားဟာ စိတ်ကူးဖြန့်ကျက်မှုရဲ့ နောက်ဆက်တွဲဂယက်
တစ်ရှုးတွေ တစ်လွှာပြီး တစ်လွှာ ထုတ်လိုက်သလို
အသွေးအသားဟာ လက်ရှိဈေးကွက်အတွင်း ခေတ်ပြိုင်အာရုံခံစားမှု
နူးညံ့ မွှေးပျံတဲ့ လည်တိုင်ကလေးကို အနောက်ကနေ လှမ်းကိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ
အနုပညာဟာ အရေပြားတွေ၊ သွေးကြော နံရံတွေကို ဖောက်ပြီး
စာသားတွေအထဲ စီးဝင်သွားတယ်၊ ငါ ကိုယ့်ငါ ပြန်လုပ်ယူ လို့ မရတော့ဘူး၊
ခေတ်ပြိုင် ပင်မ ခံစားမှု၊
စာသားတွေဟာ ကြည်လင်ငြိမ်သက်နေတဲ့ သံသယနဲ့ ဘာသာစကားအပေါ်
တစိမ့်စိမ့်ထွက်နေတဲ့အရောင်တွေ၊ မဖြစ်နိုင်ဘူး ဆိုတာ ကိုးခါ လောက် ပေါ့၊
အရေးအသားအရ မတွေ့မခံစားဖူးတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုဟာ
တခြားအရာတွေနဲ့ ဆက်သွယ်ရန် လက်ညှိုးပေါင်း တစ်ထောင်လား
ရှုထောင့်ပြောင်းခြင်းနဲ့ စပ်ဆက်ဝန်းကျင်ရဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံကို နားလည်ဖို့
နှလုံးသား နဲ့ ဦးနှောက်အတွင်းပိုင်းထဲမှာ
တွဲချိတ်မှု၊ လိုင်းဖွဲ့မှု၊ လည်ပတ်ဆောင်ရွက်မှု၊အပြုစုခံ၊ အပြဌာန်းခံ တည်ဆောက်မှု၊
နည်းစနစ်အမျိုးမျိုးနဲ့ သင်္ကေတတွေ၊ ကွင်းဆက်တွေ
အကြောင်းအရာထက် အတန်းလိုက်ရွေ့လျားနေတဲ့ ရိပ်ခနဲတွေ
ပြောင်းလဲနေတဲ့ လူမှုအလေ့အကျင့်တွေဟာ ပြဒါး
အစားထိုး ကုသလိုက်တဲ့ ၁၉ ရာစု ဖီလင် ဒဏ်ရာအတွက်
၀န်းကျင် အဆက်အစပ်ကို တည်ဆောက်ပြရတဲ့သဘော
ဘာသာစကားဆွံ့အ နေတဲ့ လမ်းတွေဟာ
မှန်ရဲ့ အလင်းပြန်မှုထဲမှာ တန်းစီပြီး လွန်ခဲ့တဲ့
တစ္စေ၊ သရဲ တွေရဲ့ အရိပ်တွေလိုမျိုး
အမည်းရောင် အမည်းရောင် တွေ ဖြည်းဖြည်းလေးလေး
နှင်းရဲ့ အရည်တွေဟာ နောက်ထပ် ထပ် ဖြစ်လာနိုင်စရာ မရှိတော့တဲ့
အမှုန်တွေရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ဆိုတာကို ပြန်လည် တည်ဆောက်ပြဖို့ဆိုတာ
Categories: collaboration, pdf and poetry
Collaborative Poetry with Lynn Ne Nyo.
ဖယောင်းတိုင်သုံး ဦးနှောက် ထွန်းပွဲတော်
လွယ်လွယ်ရတဲ့ ၅၀၀တန် ၃ရွက်ကို သိမှုအတိုင်းအတာနဲ့ယှဉ်ပြီး မသုံးရက်လို့ သိမ်းထားခဲ့တာ
ယုတ္တိနည်းလမ်းတကျ မရေရာမှုဆိုတာက ရှိနေမှာချည်းပဲ။
၅၀၀ တန်ကြောင့် မဟုတ်ပဲ ၅၀၀ ပေါ်က စာသားအချို့ကြောင့်
ရှင်သန်နေတဲ့ အမှတ်အသားတွေ၊ အမှတ်သညာတွေ
လက်ခံ မရှိဘူးဆိုမှတော့ ဘာကျန်နိုင်ဦးမလဲ
၅၀၀ တန်ဟာ ၅၀၀ တန်ပေါ့၊ ကိုယ့်အဆုံးအဖြတ်နဲ့ကိုယ် ရင်ထဲမှာ မကောင်းဘူး၊
ပေးကာနီးမှာ လိုသလိုဆွဲထုတ်ပြီး ပြန်လည်နှိုင်းယှဉ်၊ တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးပြီး ဆုံးဖြတ်တာပဲ။ ထားရမှာပဲ။
အကြောင်းက သွေးသားရဲ့ တောင့်တချက်ကြောင့် လို့ ခေါင်းစဉ်တပ်လိုက်တယ်၊
လူတိုင်းအတွက် အရေးကြီးတာက သူ့အတွေ့အကြုံနဲ့ ကိုယ့်အတွေ့အကြုံ ကူးလူးဆက်ဆံ သွားလာကြည့်ဖို့ပဲ
သွားလေရော့. . . သံယောဇဉ် . . .
စိတ်ထဲမှာ ၊ ကိုယ်ထဲမှာ၊ အာရုံထဲမှာ အရင်းအမြစ်ထဲမှာ တော်တော်ကောင်းနေပြီ၊
လေဟာပြတင်းကို လှစ်ကြည့်တော့ သီးခြားအနေအထားအလိုက် ထောင်စုနှစ်တွေ လွန် ကုန် ပြီ
ဆွဲထားတဲ့ လည်ပတ်ကြိုးမှာ စိန်ပတ်လည် စီခြယ် . . . အပြုံးများစွာနဲ့ ဆက်ဆံရေး သတ္တဝါတွေ ဆိုတာလား
အတွေ့အကြုံဆိုတာက ဖော်မြူလာအသုံးပြုတည်ဆောက်လို့မှ မရတာမျိုးပဲ
အရောင်မပါတဲ့ တောင်ပူစာတွေဟာ (သတ္တု) မိုင်းတွင်းတွေလို ကုန်းပေါ်ပြန်ရောက်မလာတဲ့သူတွေလို
ခုံအလွှတ်မှာ လွတ်ထွက်သွားတဲ့ အသက်ကို ဘယ်သူကယ်မလဲ
ယေဘုယျအနေအထားကို ထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းရဲ့ လူတိုင်း အခြေအနေတိုင်း ဖြစ်ရပ်တိုင်း အမှန်တရားတိုင်း
ဆန္ဒ နဲ့ တကယ်ဖြစ်ပျက်နေတာတွေ အဆိုတွေ စေ့ဆော်မှုတွေ
လမ်းပေါ်က ဘေးထုတ်ခံ လေးဘီးတွေက ပြုံးပြုံးကြီး
ရုပ်လောကကို အခြေခံပြီး လူချေတွေတိတ် သူ/ငါ အိပ်ချိန်မှာ
Eurasian တွေ ဘောလုံးကန်နေကြတယ်
တစ်ဖက်မှာ အောင့်သက်သက်ဝေဒနာနဲ့ ထွက်ခွာရာပြ ဝိဘတ်တွေကို ထားခဲ့ပြီ
လူမှာဆန္ဒရှိဖို့ကို နားသွင်းဖို့ မသင့်တော့ဘူး
လက်ခံခြင်း၊ ငြင်းဆိုခြင်းထက် ခုန်ဆင်းလိုက်ဖို့ ဒီနေ့အထိ အဆုံးအဖြတ် လိုအပ်နေတယ်။
ဖြစ်စဉ်ထဲက ဖြစ်စဉ်တွေကို လင့်ခ်ချိတ်ပါ (စမ်းသပ်မှုအချို့ နဲ့ ဇီဝကမ္မဗေဒ)
တံခါးကို ဘာသာစကားနဲ့ဖွင့်၊ အခုငါ မင်းကို ဒီစကားမတိုင်ခင် လျှောက်လွှာမှာ မြင်ခဲ့ပြီ မပြေးနဲ့ (ကန့်သတ်)
ကာလ၊ ဒေသ၊ ပယောဂ မျဉ်းတွေ ဖြတ်ပြေးနေသလို ရောင်စဉ်တွေကို ကာလာခွဲဖို့ Eagle ဆီ ပို့လိုက်
ဖုံးထားတဲ့ အပေါ်ယံလွှာဟာ အမြဲတစေ လိုအပ်မယ်လို့ မပြောနိုင်လည်း
တချို့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ ကိန်းဂဏန်းက ကိုး၊ အချို့တွေက ခြောက်
ဒိမတိုင်ခင်ထိ သူတို့ဘယ်သူ ဘယ်ဝါဆိုတာ ကျုပ်ကိုယ်တိုင်မသိသေးဘူး
စတာတွေရဲ့ မတူညီမှုကို လိုနေတာပဲ။
ဘာလျှိုထားတာ ရှိသလဲ? ဘာနဲ့လျှိုထားတာ ရှိသလဲ?
စိတ်ဓါတ်တစ်ခုနဲ့ စိတ်ဓါတ်တစ်ခုကြား အဲဒီကရသမျှအချက်ကို အဆုံးအဖြတ်လုပ်ဖို့
ဟော . . . သပ် သပ်ကို ဖယ်ထားတဲ့ ငါးရာတန် သုံးရွက်ရှိတာပေါ့
မဟာဗျူဟာတွေ ဆက်စပ်ဆင်ခြင်မှုတွေ ယတိပြတ်စံတွေ ဖြည့်ကြည့်စရာတွေ
ဟိုက်ဒရိုဂျင်နှစ်ဆ ချည်းကပ်လေ့လာမှုတစ်ဆ နဲ့ ဖယောင်းတိုင်ထွန်းပွဲလေး
ရေခြားမြေခြား တစ်ဖက်ကမ်းပါး မှာကျင်းပဖို့
ကျွန်တော် ဘယ်သူ့ကိုမှ မလျှိုခဲ့ပါဘူး၊
နေ့စဉ်ဘဝထဲမှာ လက်တွေ့လုပ်ဆောင်မှုဆိုတာ အကုန်ယူရတာပဲ။
ကဗျာဆရာဟာ ရိုးသားမှုကို မြတ်နိုးပါသတဲ့။
လူတိုင်းမှာ အမြင်သစ် ဒါမှမဟုတ်ရင် လက်ခံမှုအသစ် ရှိဖို့လိုတယ်။
သိုးထိန်း (အန္တိမ)၊ လင်းရမ္မာ
ရည်ညွှန်း။ ။ ဖယောင်းတိုင်သုံး ထောင်စုနှစ် မီးထွန်းပွဲတော် [လင်းရမ္မာ]
ညဟာ ဘောင်းဘီရင်လျားကြီးဝတ်ပြီး အိမ်ထဲဝင်သွားတယ်။ နေ့ဟာ ဂါဝန်ဖါးဖါးကြီးဝတ်ပြီး စိတ်မရှည်စွာစောင့်လို့။ ခင်ဗျား မြန်မာ time ကလား။ ကျွန်တော်ကိုယ့်ဟာကိုယ် time ပါဆရာ။ ဆရာကဗျာရေးလိုက်သေးတယ်လေ။ ဇွန်ဘီတွေအကြောင်းပြောနေတာ။ ဒီကောင်ကြီး အကြီးကြီးပဲ။ ပန်းသီးကိုကိုက်လိုက်တဲ့အသံ ဟားဟားဟားဟားဟား။ မော့ကြည့်လိုက်တော့ အရက်လား ရေလားမသိဘူး။ လလား ကြယ်လားဟ။ စတင်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင် ကန်တော့ပါသေးပေါက်ရဲ့။ သိမှုတွေထွက်ကျသွားလား။ အဲဒါ Big Bang လား။ ဒီလူဟာ လီဆယ်နေလား။ ဒီ Line ထဲက စကားဟာ Truth Value ဘယ်လောက်ရှိမလဲ။ Access Denied / Policy Denied / DNS Error။ ဒါအကုန်ပဲလား။ System တိုင်းရဲ့ ရင်သားဟာ ကျောပေါ်မှာရှိတယ်။ ဒါ ဒစ် ဒါဒါ ဒစ် ဒါဒါ အသေးစားလုပ်ငန်းပဲ။ ပိုမို ဟိုမို အီမို ကိုယ့်အတွေးနဲ့ကိုယ်ပေါ့။ ရပ်ချင်ရင်ရပ် မရပ်ချင်ရင်မရပ်နဲ့ပေါ့။ တော်ပြီဆိုလည်း တော်မပျော်ပါဘူး နှင်းဆီဖြူရယ်။ သူ့သိမှုနဲ့ မခံစားနဲ့ ကိုယ့်သိမှုနဲ့ခွစား ကိုယ့်လူ။ ကိုယ်တောင်မှ ကိုယ်မလုပ်နိုင်တာတွေရှိတယ်မဟုတ်လား။ ကျွန်တော့်မှာ ပိုက်ဆံမှမရှိတာ။ ကိုယ့်ခေါင်းပေါ်ကဆံပင်ရှည်လာရင်ဘာလုပ်မှာလဲ။ ရှည်တာကတော့ ရှည်နေမှာပဲ။ ခုတော့ ဝန်ဇင်းမင်းရာဇာရဲ့ လှေထိုးသမားက ပါချုပ်ဖြစ်နေပြီ။ ကဗျာထဲမှာပဲ ကဗျာအလုပ်လုပ်ခွင့်ရှိတယ်။ တကယ့်ဘဝက the girl’s poor ပါ။ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်သစ်ပင်စိုက်ပေးမှာပါ။ ကျွန်တော့်လိုရဲရင်တော့တစ်ခါတည်းပေါ့ဗျာ။ လိုချင်တာ ဘာလဲလို့မမေးဘဲ တခြား ပြောင်းမေး။ ဘာသာစကားကိုစင်ကြယ်စွာသန့်စင်ပါ။ ကိစ္စပြီးလျှင် အဖုံးကိုလှန်လိုက်ပါ။ ယူခရေးဆီး၊ ယူလေးဆီး၊ Ulysse ကျွန်တော်တို့နဲ့တော့ ဘယ်တူမှာလဲ။ မိုးရေစက်တွေ တပေါက်ပေါက်ကျနေတာဟာ လူတစ်ယောက်သတိလက်လွတ်စကားတွေပြောနေသလိုမျိုး။ အေးလုပ်လကွာ။ ခပ်ဆင်ဆင်ပေါ့။ စားပြီးသောက်ပြီး နှပ်ချီးထွက်သလိုပဲ။
ဇေယျာလင်း၊ ခင်အောင်အေး၊ ကြက်သွန်၊ တေလေ၊ လင်းရမ္မာ၊ သိုးထိန်း (အန္တိမ)